Ụmụ nwanyị na-eji ejiji - ejiji, cashmere, noodles, na uwe ogologo
Ejiji A ndu na ịzụ ahịa
Azụ ụmụ nwanyị - ụdị ejiji kachasị mma
Umu umuaka umuaka - ihe di mkpa nke uwe umu nwanyi mara nma. Na ya, ị nwere ike ịmepụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ ụwa, nke mbụ na nke dị egwu. Ihe a zuru ụwa ọnụ ga-edozi nwa agbọghọ nwere ụdị ọ bụla ọ bụla, ga-achọ mma akwa ọtụtụ nwanyị nke ejiji.
Ụmụ nwanyị mara mma
Ihe kachasị mkpa bụ maka ejiji oge. Nke a bụ cardigan nke ezigbo ákwà na akwa na akwa aka. Ọ dị mma na ihe kwesịrị ekwesị n'ọnọdụ ọ bụla. A na-eji akpụkpọ anụ nwa nwanyị ma ọ bụ agba ọ bụla ọzọ mee ụdị dị iche iche, monochrome ma ọ bụ polychrome, nke a na-eji mma akwa, akwacha, paillettes, perforations, na akụkụ dị n'akụkụ.
N'ihi na ha na-emepụta nke ọma, mma nwoke na-asọpụrụ ụmụ nwanyị na turtlenecks nke ndị na-esonụ ụdị:
ASOS . Ebee na-enweghị omenala Britain, nke uwe ya bụ nke ọnụahịa dị ala na ihe ejiji ejiji? Ndị a na-eji ejiji na-agbanwe agbanwe, na-eji ákwà dị nro, kpochapụchara ihe dị mma, ma ọ bụ ahịa ma ọ bụ ihe eji eme ihe. Ụdị mmụọ dị iche iche: golf na polo.
Mkpụrụ Obi Obi Ike . Ịdị ndụ nke ezigbo ejiji Britain . A na-eji ihe dị elu na-eme uwe. Na mgbakwunye na nhọrọ ịcha-acha, enwere uwe dị na ọnụ ọnụ ya, nke a na-eji ejiji dị ncha. A na-eji viscose mee ka ndị na-azụ ụmụ nwanyị.
Ndị na-eme ihe ọjọọ na- enye ndị ahịa ya ihe ọhụrụ na ihe okike. Ngosiputa ìhè nke a - uwe ejiji na akwa "pigtail" a na-eji ajị na akpụkpọ anụ mee ihe, akwa uwe nke ejiji, na-enye onye nwe ya ihe mara mma na inwe mmekọahụ.
Karịsịa mkpa n'oge oyi. Nke a na-ekpuchi uwe a n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-etinye ụdọ ahụ na bọtịnụ, na-eme ka úkwù dị na ọkụ ma ghara ịkpata nchekasị n'oge ejiji. Ọ dị iche na nke ahụ na-adaba na ahụ, nwere akwa dị elu, ogologo aka ma ọ bụ obere aka. A na-eyi ya jeans, akwa akwa, uwe na akwa na denim . Nwanyị na-acha ọcha na-acha ọcha ga-enye aka ịmepụta ụta na-emepụta ihe. N'ihi na agba agba gburugburu ụwa, ọ dị mma na akwa nke agba ọ bụla.
Akwa ndị inyom
Ihe kachasị iche ha bụ na n'oge ejiji akwa, akpụkpọ anụ, ajị anụ, cashmere, ajị anụ eji. N'ihi ya, anyị na-enweta ngwaahịa na-ekpo ọkụ nke na-eme ka ụbịa mmiri ozuzo na oge oyi na-ezo. Nwunye nke nwanyị na akpịrị na-ele anya na nwanyị naanị mgbe ọ na-adaba n'ụzọ ziri ezi:
"Ube" . Nhọrọ gị bụ oke elu, nnukwu elu, nke ga-edozi ala. Maka nsụgharị siri ike, tinye akwa ịchafụ. Ọ bụrụ na ị nwere obere obere obi na akwa ọdịda, ọ ga-enyere aka dozie ezughị okè nke akụkụ dị elu na nke ala nke onu ogugu.
"Hourglass" . Ụdị ụdị a, dịka uwe na ihu. O doro anya na ọ ga-emesi ịdị ùgwù ya ike, ga-aghọ ihe dị mkpa nke ekike. Yiri ya n'egbughị oge, ọ bara uru ka ọ mee ma ọ bụ.
Triangle ajuju . Mee ka anya na tulle nke tulle na otu nwanyi. Ị chọrọ iyi uwe ogologo ọkpa? Na-enye mmasị na ihe nlereanya nke flares. Ihe ndị dị mkpa bụ ụmụ nwoke-nwoke-nwoke .
Apple . Nhọrọ gị abụghị uwe kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụghị ya, merie ihe oyiyi ahụ site n'ịgbakwụnye n'ebe nsogbu ahụ dị na centimet.
Ụmụ nwanyị na-azụ ụmụ nwanyị
N'afọ 2014, ọmarịcha ịma mma a kpuchiri ụlọ ọrụ ejiji. Ụmụ nwanyị ndị na-elegharị anya na ụmụ nwanyị na-eji ụkwụ na-eme ihe na-adabara n'okpuru uwe akwa, uwe elu nke ogologo. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere ụdị ndị a ma ama, mgbe ahụ, "ọkara nke abụọ" ha ga-abụ agbarụgharị na ndị enyi nwoke. Ebube mara mma - umunwanyi na-eji oji na uwe di iche iche nke Marlene Dietrich. Ihe odide nke vidio ga-eme ka anya na mgbakwunye nke ụda sara mbara .
Nwunye Shinei na-ejikarị aka
A na-akpọ ụmụ nwanyị na-ekpo ọkụ n'oge oyi ma ọ bụ, dịka a na-akpọkwa ha, badlocks - ihe dị mfe nke ụwa dum, na-enyere ọbụna n'oge oyi a anya 100%. N'ọkwà ahịa, ọ ga-abụ ezigbo ngbanwe maka uwe ejiji. Maka ọnọdụ ọrụ, họta ịma mma nke monochrome, uwe nchara mara mma, uwe nkedo. Ọ bụ ịhụnanya? Mgbe ahụ nhọrọ gị bụ akwa jeans na ma ọ bụ na-enweghị ihe ndozi, na uwe akwa, a cardigan. Ndị Romantics, na ndị stylists zoro ihe dị iche iche: ihe nchara dị ọcha na nnukwu ngwaahịa na ụdị nke boho.
Ogologo oge umunwanyi
Ngwongwo umuaka nke umu nwanyi a ga-abughi ihe nkwekorita na ihe ndi di ka:
Otu uwe mwụda na ogologo oge elekere, ụfụfụ na ikiri ụkwụ, uwe ma ọ bụ trenchi ga-enyere aka ịmepụta obere ihe oyiyi, na uwe mwụda na eriri ụkwụ kwesịrị ịgbakwunye ya na akwa jaket.
Akara mkpụmkpụ, bọmbụ, boxy-jaket ma ọ bụ ọdọ mmiri dị mfe ga-eme ka ị bụrụ ebe etiti ọ bụla.
Awụnye ọkụ, akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu, uwe na belt ma ọ bụ obere jaket bụ ụdị ọzọ dị iche iche.
Uwe ejiji, akpụkpọ ụkwụ n'ụdị mmadụ, jaket akpụkpọ anụ ma ọ bụ jaket - abụghị naanị uwe nke 50s nke narị afọ gara aga, kamakwa ụdị uwe kachasị mma.
Nnukwu ọkpụkpụ na ọkpụkpụ ndị inyom dị mkpa na-ele anya na-adighi ike, nro na nwanyi. A ghaghị ịkwado nke ikpeazụ a n'ime ala azụ. Uzo n'okporo ámá kwesiri iyi uwe mara mma na ndi na-acha uhie uhie ma o bu ihe ndi ozo.
Ọmụmụ ihe ga-eme ka ụlọ ọrụ mara mma dịka ihe na-adọrọ mmasị nke uwe akwa. A ga-ahọrọ elu na ala ka ịhọrọ otu palette agba. Isi ihe ebe a bụ ịdị n'otu nke ejiji.
Ụmụ nwanyị na-emeghe ọnụ ọgụgụ ndị inyom
Umu umuaka nke nwanyi, nke eji ejiji ma obu kpamkpam nke jade, na-egosiputa ezigbo ihe eji eme ihe, umunwanyi, na obi iru ala. Ha ga-agbanwe akwụkwọ ọ bụla ọbụla ka ọ dị mma. Karịsịa n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ekike ekike. Ụmụ nwanyị na-eme ihe mara mma na-adọrọ mmasị ụmụ nwoke mgbe nile. Ọ dị mkpa icheta na ọ ga-eji nlekọta anya. Ejikọtala amara mara mma na ngwa ndị yiri ya. Jikọọ naanị na ndị klọkọta, bọtịnụ ziri ezi. Taboo na nchikota na uwe ejiji na ihe di iche iche.
Umu umunwanyi na akwa aka
Mgbe ị na-ahọrọ uwe ndị a, ọ dị mkpa iburu n'uche ọnụ ọgụgụ nke nuances ndị a:
Ụmụ nwanyị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ejighị akpụkpọ ụkwụ na uwe;
ákwà dị mkpa ga-eme ka ị dị mma na nhazighachi;
ogologo aka kacha mma maka ejiji oyi;
ọ ka mma ịhọrọ ụdị anụ ahụ nke ahụ na-eku ume;
Ụdị kpochapụ ahụ kwesịrị ekwesị na ụdị ọ bụla.
Umu ejiji nwanyi
Mast-hevom nke ọ bụla oge bụ ọkacha mmasị "ọtụtụ". N'ihe na-emekarị ihe nlereanya, na-eme ka akụkụ ahụ na-adọrọ adọrọ nke ahụ gị pụta ìhè. Ha na-adabara umuaka na umuaka na umuaka ndi na-achoghi anya isi nke ihe omuma. N'okwu ikpe a, ọ dị mkpa iji mesie ọkpụkpụ ahụ ike, na-adọpụ uche na mpaghara nsogbu. N'elu ejiji-Olympus ọ bụghị naanị ụmụ nwanyị na-ebugharị ndị na-agagharị agagharị, kama ọ na-ewu ewu. A na-eji ákwà woolen mee ihe. Ha na-eji aka dị iche iche, ngwugwu-ngwugwu, na-egbutu n'akụkụ nke ọ bụla, nkpuchi.
Ndị inyom na-ejikarị ejiji
N'elu ejiji ejiji ihe dị iche iche. Nke a bụ ụdị anụ ahụ dị mkpụmkpụ nke ụmụ nwanyị, nke a ga-eyi n'oge opupu ihe ubi, n'oge okpomọkụ. Ha "ndị agbata obi" ha ga-abụ uwe mwụda, akwa akwa na ọkpọ ụkwụ na-egbuke egbuke, uwe elu. Na ụdị nke "Mbipụta ndị na-akpali mmasị," nke mbụ na- ebipụta akwụkwọ nri floral, mbipụta leopard , coloblocking na "akwa". A na-ekezi umuaka ụmụ nwanyị iji nweta uwe, ya mere ejikọta ya na ọdịdị dị iche na agba.
Ụmụ nwanyị na-agba chaa chaa
Siri ncha - eji aha a akpọ ihe a, ma ihe niile gbasara atụmatụ ya:
nne na - ekpo ọkụ nke ukwuu - okpukpu asaa okpukpo karịa woolen;
cashmere anaghị akpata allergies;
adịghị ewe iwe ahụ;
anaghị ahapụ villi ma ghara ịmepụta pellets;
ka aka dị ka silk.
Ụmụ nwanyị na-eji akpụkpọ anụ woolen
Ndị inyom na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ site na ajị anụ nwere ọtụtụ uru ndị a:
ihe dị ọkụ;
ike ijide okpomọkụ ruo ogologo oge;
emela ka iwe gwụ gị;
Ruo ogologo oge, ngwaahịa ahụ na-eburu ọdịdị mbụ ya;
ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma;
ihe okike nke na-eme ka akpụkpọ ahụ na-eku ume;
na-amanye ntakịrị mmiri, ajị na-emepụta okpomọkụ;
ihe a bu hygroscopic.
N'oge ochie, silk bụ ihe kacha asọpụrụ. O nwere ihe pụrụ iche nke dị naanị na uwe akwa silk:
eriri anụ ahụ nke kachasị ike;
Onyonyo nke silk eri na-egosi ìhè, nke na-enye anyị ịma mma na-adọrọ adọrọ nke njigide;
Ọ dị ike karịa owu, ọ bụghị n'okpuru mmegide nke ebu na ero;
dị nnọọ mma;
dị nwayọọ ma na-ekpo ọkụ.
Ọ dị mfe agba, ya mere nwatakịrị ọ bụla nwere ike ịchọta uwe maka uto gị. Nwa nwanyi na-acha ọcha, na-acha ọcha, pink, nwa na agba ndị ọzọ na-ele anya n'àkwà ọ bụla. A sị ka e kwuwe, a na-eji ya eme ihe nke na-adịghị eji ejiji. Ọ bara uru icheta na akụnụba nke silk na-esi ike (ma e wezụga: crepe-georgette na chiffon), mmiri ozuzo nwere ike ịkwata ngwaahịa, na-ahapụ stains na ya (wepụrụ na mmanya).
Uwe na-emeghe n'ubu
Akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ nwanyị dị ime
Ewu na-ekpuchi site na nkịta
Nwa akwa nwanyi
Ndị na-akpụ ụkwụ
Uwe akwa Coral - ihe na-eyiri ndò siri ike?
Ejiri akwa - 80 foto nke ejiji oyiyi na uwe agba
Ụmụ nwanyị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Uwe ejiji maka ụmụ nwanyị zuru oke
Kedu ihe m ga - eme mgbe m gụsịrị akwụkwọ 9?
Ọkwa dị elu nke ịdị elu
Pọọl na tonsils
Kedu esi agbacha isi?
Nwa nwanyi Candace Swainpole na nne ya na nwa ya
Fried patties na obi cheese
Onye na-eme ihe nkiri Emma Watson kwuru banyere ịhụnanya na setịpụrụ "Harry Potter"
Umu akwa nke umu umuaka
Kedu osikapa dị mkpa maka pilaf?
Na-eche ihu na ụlọ
Akwa uwe yak
Nkwadebe maka ụlọ akwụkwọ maka ndị na-eto eto
Ntu site na anya ojo - esi eji?
Na-agba ọsọ na oyi na n'okporo ámá dị mma na ihe ọjọọ
Jennifer Coolidge n'oge ọ bụ nwata
Gịnị bụ ịba ọcha n'anya, oleekwa ihe dị ize ndụ dị iche iche nke imeju imeju?